Nikela ngento encinane qho usamkela iindwendwe
Nikela ukuze uncede abantu abachatshazelwe ziintlekele, uqhushululu nokugulela ukufa.
okanye unikele ngendawo yakho
"Ndiza kukhumbula yonke into ngolu hambo kuba ndiluthande gqitha."
“Andinakutsho ukuba ndibona ikhaya ngendlela efanayo kunangaphambi komlilo njengokuba ndilibona ngoku. Ikhaya, kum, kulapho intsapho yakho ikhoyo. Ikhaya ungalenza naphi na.”
Undwendwe Lwamakhaya Oncedo
“Le nkqubo ivumela usapho ukuba lujolise kwimpilo yomntu olumthandayo endaweni yokuba lukhathazeke ngokuba ndiza kuyibhatala njani indawo yokuhlala? Ndingasondela njani kubo?”
I-Fisher House Foundation
Indlela esebenza ngayo iminikelo
Khetha into oza kunikela ngayo
Sixelele ukuba yeyiphi ipesenti ofuna itsalwe ngokuzenzekelayo xa ubhatalwa.
I-100% iya kwimibutho engenzi ngeniso
Le mali isetyenziselwa ukufunela abantu abasweleyo izindlu zexeshana.
Fumana iindaba ezintsha qho ngendlela umnikelo wakho owenze ngayo umahluko.
Iminikelo yakho inceda abantu bafumane izindlu ngelona xesha bazidinga ngalo
Abantu abancediweyo ukuza kutsho ngoku
NgaMakhaya Oncedo, ababuki zindwendwe baye banikela ngeendawo zabo simahla ukuze kuhlale abantu ababaleke engozini, abasebenzi abahlangulayo, abaphambukeli, nabanye. Kodwa ayinguye wonke umntu onokubuka iindwendwe mahala.
Kutheni ababuki zindwendwe benikela
"Ndinomtshana endimthandayo onesifo esingaqhelekanga ibe ndiyayazi ukuba ibiba yintsikelelo kangakanani kwintsapho yakhe xa kufuneka behambile ekhaya baze bakwazi ukuhlala kwindawo abangazokuyibhatala."
UAnnette, umbuki zindwendwe waseNew Castle, CO
"Ndisebenza kwikliniki yomhlaza kwaye ndiyayiqonda imfuneko engxamisekileyo yeendawo zokuhlala zongxamiseko kunye nobubele kubantu abangabaziyo!"
UAurora, umbuki zindwendwe waseSanta Clara, CA
"Ndibona le nto iyindlela yokubuyisa izipho ezininzi nenkxaso esayifumana kuluntu njengoko umyeni wam wayechacha kumhlaza okwinqanaba 4."
UTess, umbuki zindwendwe wase-Port Townsend, e-WA
"Ndiyazi kum ukuba kunjani ukungabi nandawo yokulala, ngoku ndifuna ukunceda abantu abakwiimeko ezifanayo"
UAdam, umbuki zindwendwe wakwiiNtaba zaseNorth Carolina
“Ndiye ndanomhlaza wencindi yegazi ukususela xa ndandineminyaka eyi-12 ukuya kutsho kweyi-28, ibe kwakufuneka ndihambe amakhulu eemayile ukusuka ekhaya ukuze ndinyangwe. Yayilixesha elinzima nelokuphela kwemali kubazali bam. Ndiyakuvuyela ukufumana ithuba lokunceda omnye umntu. ”
UJudy, umbuki zindwendwe wase-Santa Maria, e-CA
"Ndiwabone kakhulu amaxesha obunzima naweentlekele zemvelo. Nantsi indlela entle yokunceda omnye umntu.”
UGary, umbuki zindwendwe waseTalent, OKANYE
Yiva kubantu abaye bafuna izindlu zokwexeshana.
"Eli lithuba elihle lokunceda umntu osenokufuna ixesha lokucinga okanye indawo ukuze acinge into elandelayo amakayenze."
ULaura, undwendwe kwisixeko saseMexico · Funda ngoncedo lwaxa kukho intlekele
"Sipheka kunye size sitye kunye. Ndingatsho ukuba ingathi yintsapho yam.
UFode, undwendwe eRome · Funda ngeendawo ezihlala kwabaphambukeli
"Ngokuqinisekileyo indenza ndizive ndisekhaya ngakumbi ngoxa ndikwikhaya lomnye umntu."
U-Ashlee, undwendwe e-Salt Lake City · Funda ngendawo ekuhlala abeze ngenxa yokugula
Kulo nyaka qha, u-Airbnb ubekela bucala imali engaphezu kwe-$20 yezigidi ukuze ancede abantu abadinga izindlu, kuquka iigranti eziya kwimibutho engajonganga nzuzo enjengo-Make-A-Wish® Foundation kunye neKomiti Yokuhlangula Yamazwe Ngamazwe.
Sizama ukufumana izisombululo
Sineqela leengcali kwimibutho engajonganga nzuzo nezeteknoloji elisebenzela ukuphucula iwebhusayithi Yamakhaya Oncedo. U-Airbnb ubhatala zonke iindleko zokwenza oku.
Asitsali nto thina
Iminikelo yakho iya kwiindawo ezithembekileyo ezingajonganga nzuzo ezinceda abantu bafumane iindawo zokuhlala. Zonke iindleko zokusebenzisa u-Airbnb zibhatalwa sithi, ukuze wonke umnikelo wakho uyokunceda abantu abasweleyo.
Dibana namahlakani ethu
Sisebenza neminye yemibutho ephambili ehlabathini engajonganga nzuzo enika abantu abasweleyo iindawo zokuhlala zexeshana.
IKomiti Yokuhlangula Yamazwe Onke
Umbutho ongenzi nzuzo onceda abaphambukeli balungise ubomi babo ngokunikela inkxaso, indawo yokuhlala nemfundo.
Uluntu Oluxhasa Abagula Ngumhlaza
Imibutho engenzi nzuzo yasehlabathini lonke ezinikele ekuziseni ulwazi, izixhobo nentsapho kwizigidi zabantu abachatshazelwe ngumhlaza.
I-All Hands and Hearts
Umbutho wasehlabathini lonke wokunceda xa kukho intlekele onceda abahlali abantlithwe yintlekele yemvelo ngokubanika izinto abazidingayo.
Iqela elizondelela ukunceda uluntu emhlabeni wonke lisebenzela ukusindisa ubomi ngexesha leentlekele zendalo neengxaki ukuze lincede uluntu lubuyele empilweni ngokukhawuleza ngakumbi yaye lomelele ngakumbi.
Iphendulwe imibuzo yakho
Awuwufumani umbuzo wakho apha? Yiya KwiNdawo Yoncedo
Iyatsalwa irhafu kwiminikelo?
Kubabuki zindwendwe ababhatala irhafu yengeniso eMerika, iminikelo inokuncitshiselwa irhafu ngomlinganiselo ovumelekileyo phantsi komthetho werhafu waseMerika njengomnikelo wesisa oya kwiNgxowa-mali Yamakhaya Oncedo, ekwi-PayPal Giving Fund. I-PayPal Giving Fund ngumbutho wesisa okhululekileyo ekubhataleni irhafu yengeniso kurhulumente waseMerika (a 501 (c) (3) charity). Kubabuki zindwendwe abangabahlali abarhafayo baseMexico, iminikelo inokuncitshiselwa irhafu phantsi kweSivumelwano seMerika/neMexico Sokuthintela Ukurhafiswa Kabini, xa kufikelelwa yonke imiqathango efanelekileyo. Sizama ukwenza ukuba iminikelo incitshiselwe irhafu kubabuki zindwendwe abakwamanye amazwe, kwaye siza kukwazisa xa sinenkcazelo entsha ngendawo okuyo.
Ndingayitshintsha imali yam yomnikelo emva kokuba ndingenile?
Ewe. Ungatshintsha ipesenti yomnikelo wakho okanye uyeke ukunikela nanini na Kwidashbhodi yakho Yokubuka Iindwendwe. Ungayitshintsha nanini na imali yomnikelo ngaphandle kokuba uAirbnb sele eqalisile ngokubhatalwa kobhukisho, okudla ngokwenziwa kusuku emva kokuba undwendwe luhambile.
Yiyiphi imibutho engajonganga nzuzo eza kufumana umnikelo wam?
Umnikelo wakho uya kuxhasa imibutho engenzi ngeniso elungiselela abantu izindlu zethutyana xa behamba ngenxa yemilo, intlekele, unyango, okanye ukufuna isiqabu. Le mibutho yeyabantu abaziingcali nabaziwayo kwihlabathi liphela kwizinto enceda ngazo, kuquka ii-Mercy Corps kunye noLuntu Oluxhasa Abagula Ngumhlaza. Funda okungakumbi ngabo bancedwa yiminikelo yakho ku-airbnb.com/amakhayaoncedo.
Umnikelo wam unceda njani ekufumaneleni indawo abantu abasweleyo?
Izigidi zabantu kwihlabathi jikelele zigxothwa kwiindawo zazo ngenxa yezidubedube neentlekele, okanye kuba zifuna uncedo lwezonyango—ibe iindleko zisenokuba ngowona mqobo wokufumana izindlu zokwexeshana zamaxesha ongxamiseko. Iwebhsayithi Yamakhaya Oncedo sele ifunele abantu abangaphezu kwe-50 000 iindawo zokuhlala zokwexeshana nezingabhatalwayo. Ngokunikela, unceda amahlakani entsapho yethu anike abantu abasweleyo iindawo zokuhlala zokwexeshana ezingakumbi.
Ndingaziswa njani ngomnikelo wam?
Uza kukwazi ukubona imali onikele ngayo kwiDashbhodi Yombuki Zindwendwe, onokungena kuyo nanini na ngokuya ku-airbnb.com/hosting. Ukongezelela, ngamaxesha athile siza kukuthumelela ngeimeyile ezintsha ngefuthe obe nalo, kuquka nengxelo yonyaka yeminikelo.
Ababuki zindwendwe base-United States kunye namanye amazwe angaqalisa namhlanje ukunikela. Sisebenzela ukuba iminikelo ibekho nakwamanye amazwe njengokuba ixesha lihamba. Ukuba okwangoku awukwazi kunikela ku- airbnb.com/amakhaya oncedo/iminikelo, nceda uphinde ujonge kwixesha elizayo.